Iindaba -Ukulwa neZifo eziBhubhane, Ukuhambisa ngexesha!
Ukulwa nobhubhane, Ukuhambisa ngexesha!
Ukujongana nokuqhambuka kobhubhane we-coronavirus, abasebenzi be-SHEHWA bathatha onke amanyathelo afanelekileyo okuqinisekisa "ityala lokusuleleka nguZero", kwaye bezama konke okusemandleni ukwenza ukuthunyelwa kwangexesha.
Nge-5 kaMatshi, ngo-2020, ibhetshi ye-TS160-3HW bulldozer yathunyelwa kwimarike ye-Southeast Asia ngexesha. Ngomhla kaFebruwari 3, 2019, i-SD6KLGP i-hydrostatic yokuqhuba i-bulldozer eyenziweyo eyanyanzelisa iimfuno ezibonelelwa ngumthengi zisiwe kubasebenzisi bokuphela bemarike ye-Southeast Asia.
I-SD6K luhlobo lwetrackzld bulldozer ene-semi-rigid enqunyanyisiweyo, i-elektroniki yolawulo er, iisekethe ezimbini zolawulo lwe-elektroniki inkqubo yokuqhuba, ukulawulwa kombane ukuvala umthwalo weziko ukuthumela inkqubo ye-hydraulic.
I-SHEHWA iphumeza inkqubo yesayensi kunye netekhnoloji ngokwendlela ehlanganisiweyo ye "Imveliso, uPhononongo, uPhando, ukuQaphela", ukusombulula kunye nokugqobhoza iteknoloji, kuphucula ubuchule bokuyila kunye nelever kakhulu. Ngo-2011, i-SHEHWA iphuhlise umhlaba ophambili kulawulo lwe-hydraulic SD7K
I-bulldozer, i-SD9 bulldozer ifezekisa iSatifikethi seSizwe seMveliso esiSebenzayo kunye neMbasa yeSayensi neThekhinoloji yePhondo. I-bulldozer ye-SD8 ifezekisa iSatifikethi seHlabathi sokuVunywa okuMiselweyo. I-SD8 yokubuyisela umhlaba kwi-bulldozer ifezekisa iphondo le-Hebei Metallurgy Science and Technology Awards.
U-SHEHWA ubambelela kwintandabulumko: U-SHEHWA umisele amasebe angaphezu kwama-30 kulo lonke elase China, kwaye waseka ubambiswano lwexesha elide kunye nentsebenziswano nabathengisi abangaphezulu kwama-50. Inethiwekhi yentengiso kunye nenkonzo igubungela ilizwe liphela, iimveliso zenza ngokufanayo, kwaye zithunyelwa eRashiya, eMzantsi-Melika, eAfrika, kuMbindi Mpuma, njl.njl, ngaphezulu kwamazwe angama-90 kunye nemimandla, kwaye zakha ubuchule bexesha elide kunye nentsebenziswano abathengisi bendawo.
I-SHEHWA izakulandela umgaqo wokuprinta ngokupheleleyo, ngokulandelelana kunye nokuthumela ngokuthe ngcembe, ukuphuhlisa ngocwangco, ukukhuthaza kakhulu uphuhliso lwamashishini amahlanu abandakanya oomatshini bokwakha, oomatshini bezemigodi, oomatshini bentsimbi kunye nokukhusela okusingqongileyo, ukuphosa kunye namacandelo aphambili, intsimbi enzulu yokwenza njl njl. kwaye wenze iinzame ezinkulu zokwakha i-SHEHWA ukuba ibe sisixhobo sokwenza imveliso yanamhlanje ngesikhundla sokukhokela-sasekhaya, kwiklasi yokuqala yamazwe aphesheya, ukudityaniswa kobunjineli, oomatshini bemigodi, oomatshini bokwenza metallurgical & bokhuseleko-oomatshini.
U-SHEHWA uya kuthi ngqo kwifilosofi yeshishini "yokudala ixabiso labathengi" ukufezekisa iinkonzo zasemva kokuthengisa.